Hlola i-India - World Tourism Portal
Yini ongabona, Best top ezikhangayo eNdiya
Okufanele ukwenze eNdiya
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseNdiya
Bukela ividiyo ekhuluma ngeNdiya
Hlola i-India, izwe elikhulu kunawo wonke eSifundeni saseNingizimu Asia, elitholakala enkabeni yeSouth Asia. IRiphabhulikhi yaseNdiya iyizwe lesikhombisa ngobukhulu emhlabeni wonke ngendawo, futhi inabantu abangaphezu kwesigidi sezigidi, ingelesibili kuphela eChina kubantu, yize izinga eliphakeme kakhulu lokuzalwa lenza ukuthi lifinyelele isikhundla sobukhosi maduze.
Yizwe elihluke ngokweqile, elinomehluko omkhulu ngokwendawo, isimo sezulu, isiko, ulimi kanye nobuzwe kulo lonke umkhathi, futhi liyaziqhenya ngokuba yintando yeningi enkulu kunazo zonke eMhlabeni futhi liyindawo yokuhweba eSoutheast Asia.
“Siphila ezweni elihle eligcwele ubuhle, i-charm ne-adventure. Akukho ukuphela kwezikhathi esingaba nazo uma nje sizifuna zivulekile. ”- UJawaharlal Nehru
AmaNdiya aziwa ngokwazisa ngemenywa yawo e-Sanskrit ethi “Isivakashi sifana noNkulunkulu”. Isiko namagugu aseNdiya kuyindlela enhle yokuxhumana yesikhathi esidlule neyamanje. Leli lizwe elikhulu linikeza isivakashi umbono wezinkolo ezithokozisayo kanye ne-ethnography, izinhlobo eziningi zezilimi ezinezilimi ezingaphezu kwe-438 zokuphila phakathi kwezilimi ze-1600 nezinkulungwane zezilimi, nezikhumbuzo ezibe khona izinkulungwane zeminyaka. Njengoba ivula izwe lomhlaba wonke, i-India isenomlando ojulile nokuqina kwesiko elihlaba umxhwele futhi lihehe abaningi abavakashela lapho.
I-India isalokhu ingenye yezomnotho ezikhula ngokushesha emhlabeni futhi ingelinye lamazwe asathuthuka ngokushesha. Kubhekwa njengamandla amakhulu avelayo. Ngakho-ke, ukuvakasha kwakho ngempela kuzoba okuthakazelisa.
Izintaba, amahlathi, ogwadule, namabhishi, i-India inakho konke. Iboshelwe enyakatho nasenyakatho-mpumalanga yiHimalayas eboshwe yiqhwa, indawo ende kunazo zonke ezintabeni emhlabeni. Phezu kokuvikela izwe kubahlaseli, baphakela nemifula yaphakade iGanga, Yamuna (Jamuna) neSindhu (Indus) lapho impucuko yaseNdiya yakhula khona emathafeni. Yize iningi lamaSindhu likhona ePakistan manje, ezintathu zentengiso zalo zihamba ngePunjab. Omunye umfula iHimalayan, iBrahmaputra ugeleza usiya empumalanga esenyakatho-mpumalanga, ikakhulukazi nge-Assam.
Uhlaka lwethanga likaDeccan luboshwe yiSahyadri (Western Ghats) isukela entshonalanga kanye ne-Eastern Ghats empumalanga. Ithafa liwugwadule kakhulu kunamathafa, njengoba imifula eyondla le ndawo, njengeNarmada, uGodavari neKaveri liba owomile phakathi nehlobo. Ngasenyakatho-mpumalanga yethafa likaDeccan yilokho okwakuyindawo enamahlathi aminyene ebizwa ngokuthi i-Dandakaranya ehlanganisa izifunda zeChhattisgarh, iJharkhand, umngcele osempumalanga weMaharashtra kanye nesihloko esisenyakatho se-Andhra Pradesh. Le ndawo isahlala ihlathi futhi inabantu bendabuko. Leli hlathi lasebenza njengesithiyo ekuhlaselweni yiNingizimu Melika.
I-India inogu olude. Ugu olusentshonalanga luwela umngcele wolwandle i-Arabian kanye nogu olusempumalanga neBay of Bengal, zombili izingxenye zoLwandlekazi i-Indian.
ENdiya, lina kuphela ngesikhathi esithile sonyaka. Isizini ibizwa nge- monsoon.
I-India ibhekana okungenani nezinkathi ezintathu ngonyaka, ihlobo, iNkathi yeMvula (noma i-“Monsoon”) ne-Zima, yize endaweni eseningizimu ne-tropical ebiza isimo sezulu i-25 ° C ngokuthi “Ubusika” kuzobe kukhulisa umqondo. INyakatho ihlangabezana nokushisa ngokweqile ehlobo futhi kubanda ebusika, kodwa ngaphandle kwezifunda zaseHimalaya, iqhwa cishe alizwakali. NgoNovemba kuya kuJanuwari yisikhathi sasebusika kanti u-Ephreli noMeyi yizinyanga ezishisayo lapho wonke umuntu elindele ngabomvu izimvula. Kukhona nentwasahlobo emfushane ngoFebhuwari nangoMashi, ikakhulukazi eNyakatho India.
Kunamaholide amathathu ezwe lonke: I-Republic Day (26 Januwari), Usuku Lokuzimela (i-15 Agasti), kanye noGandhi Jayanti (2 Okthoba) ezenzeka ngosuku olufanayo minyaka yonke. Ngaphezu kwalokho, kunemikhosi emine emikhulu ezweni lonke enezinsuku eziguqukayo okufanele uqaphele:
IHoli, ngoFebhuwari noma ngoMashi - Umkhosi wemibala ngumkhosi omkhulu ogujwa ikakhulukazi eNyakatho, eMpumalanga naseNtshona India. Ngosuku lokuqala, abantu baya emathempelini nemililo ekhanyayo, kodwa ngokwesibili, kuyinto engenamanzi ehlanganiswe nezihlambi zempuphu enemibala. Lo akuwona umdlalo wezibukeli: njengowesinye isizwe obonakalayo, ungumazibuthe okufanele unakwe, ngakho-ke kuzodingeka ukuthi uzithibe ngaphakathi, noma ugqoke izingubo zakho ezilahlayo kakhulu ujoyine ubumnandi. I-Alcohol ne-bhang (cannabis) zivame ukubandakanyeka futhi izixuku zingakwazi ukuhamba njengoba ukugqoka kusihlwa kugqokwa. Imikhosi iyingcosana eSouth India, noma imigubho yangasese ivela phakathi kwemiphakathi yaseNyakatho India ehlala emadolobheni amakhulu aseNingizimu India
UDurga Puja / Navarathri / Dussehara, Sep-Oct - Umkhosi wezinsuku eziyisishiyagalolunye ophetha ngosuku olungcwele eDasara, lapho abantu bendawo bekhuleka unkulunkulu uDurga. Abasebenzi banikezwa amaswidi, amabhonasi emali, izipho kanye nezingubo ezintsha. Futhi kungunyaka omusha kosomabhizinisi, lapho kufanele baqale izincwadi ezintsha zama-akhawunti. Kwezinye izindawo ezifana neWest Bengal, iDurga Puja ingumkhosi obaluleke kakhulu. Enyakatho nemikhosi yakwaDussehara yenzeka kanti ukubulawa kukaRavana yiNkosi Rama kwenziwa ngokwesiko njengoRam Lila. EGujarat naseNingizimu India, kugujwa njengeNavarathri lapho umkhosi ugujwa khona ngokudansa kuya ezingomeni zezenkolo kanye nokugujwa kwenkolo efana nokudla okwandisiwe ngaphezulu kobusuku be-9.
I-Eid-ul-Fitr, iholide lenkolo elikhulu kakhulu lonyaka kumaSulumane aseNdiya, igubha ukuqala kwenyanga engcwele yeSawwal. URamzan uphela ngomkhosi we-Eid-ul-Fitr owanda izinsuku eziningi. Ukudla kungukugqamisa, futhi uma unenhlanhla uzomenyelwa ekhaya elizimele lomkhosi. Amabhizinisi avala okungenani izinsuku ezimbalwa uma kungenjalo isonto.
UDiwali (Deepavali), Oct-Nov - Umkhosi wamalambu, ugubha ukubuya kweNkosi Rama enhlokodolobha yombuso wayo, u-Ayodhya ngemuva kokudingiselwa iminyaka engu-14. Cishe umkhosi ovelele kunazo zonke ezweni, ukhumbuza (kubahambi base-US okungenani) bokudla kwe-Thanksgiving kanye nezitolo kanye nezipho zikaKhisimusi ezihlangene. Izindlu zihlotshisiwe, kukhona okukhazimulayo yonke indawo, futhi uma uzulazula emigwaqweni ngobusuku beDiwali, kuzoba nezicishamlilo ezihamba yonke indawo kufaka phakathi kwesinye isikhathi ngaphansi kwezinyawo zakho.
Ngaphandle kwalokhu, izwe ngalinye linomkhosi walo omkhulu wezwe onjenge-Onam for Kerala noma i-Sankranti ye-Andhra Pradesh & Karnataka noma iPongal yeTamil Nadu noma iBaisakhi yePunjab noma i- “Ratha Yatra” ka-Odisha, egujwa njengeholide lomphakathi ezifundazweni zawo.
Amaholide enkolo avela ezinsukwini ezihlukene unyaka ngamunye, ngoba imikhosi yamaHindu neyamaSulumane isuselwa kumakhalenda abo aqondile hhayi kwikhalenda likaGregory. Iningi labo ligubha endaweni yangakini, ngakho-ke hlola isimo noma idolobha ovakashele ukuthola imininingwane yokuthi kuzoba nokuvalwa yini. Izifunda ezahlukahlukene zinganikeza amagama athile ahlukile emnyanyweni ofanayo. Ukuze kuhlangatshezwane nemikhuba eyahlukene yenkolo, amahhovisi anohlu lwamaholide angakhethwa (abizwa ngamaholide akhawulelwe nguhulumeni) lapho abasebenzi bavunyelwe ukuthi bakhethe okubili, ngaphezu kohlu lwamaholide alungiselelwe. Lokhu kungasho ukuya kwezinsizakalo nokuya emsebenzini ngokubambezeleka noma ngabe ihhovisi livulwa ngokusemthethweni.
Amadolobha amakhulu akhona Delhi, Kolkata, Mumbai, Agra ukuze kufundwe okuningi
Izifunda - kukhomba India
I-India iyikhaya lezinkulungwane zezilimi. Imindeni yezilimi eziphambili eNdiya yi-Indo-European ne-Dravidian (okuyizikhulumi ezingaba yizigidi ezingama-800 nezikhulumi eziyizigidi ezingama-200 ngokulandelana). Eminye imindeni yezilimi ibandakanya i-Austro-Asiatic neTibeto-Burman, phakathi kwezinye ezincane. I-Hindi yamukelwa njengolimi olusemthethweni loHulumeni Wenhlangano (alukho uLimi kaZwelonke waseNdiya olwaziwayo), nesiNgisi sisebenza njengolimi olusemthethweni "olusizayo".
Ama-ATM ayinala kulo lonke elaseNdiya - yize kungatholakali ezikhumulweni zezindiza ezincane. Ama-ATM amaningi azokhokha okungenani nge-₹ 10,000 emsebenzini ngamunye - amanye azokhokha pay 20,000.
Kuyasiza ngaso sonke isikhathi ukuthi ube namakhadi asebhange noma amakhadi wesikweletu avela kubanikezeli okungenani abehlukene ukuze uqiniseke ukuthi une-backup etholakala uma kungenzeka ikhadi elilodwa limiswe yibhange lakho noma nje alisebenzi e-ATM ethile. Uma uthola i-ATM isithi "ikhadi elingalungile", zama ukuyifaka futhi uyisuse kancane.
Ukuthi udlani eNdiya
Ukuphuza ini eNdiya
Ukubhema Komphakathi kuvinjelwe ngokusemthethweni futhi kuhlawuliswe
Amanzi ompompi ngokuvamile awabhekwa ephephile ukuphuza ekufakweni okuningi, ngisho nakubantu bendawo. Kodwa-ke, izikhungo eziningi zinokuhlunga / izihlanza zamanzi ezifakiwe, lapho kungenzeka khona amanzi aphephile ukuwaphuza. Amanzi okuphuza ahlanganisiwe (aziwa kakhulu ngokuthi “amanzi amaminerali” kulo lonke elaseNdiya) yisinqumo esingcono. I-Bisleri neKinley phakathi kwabanye kungenye yemikhiqizo edumile futhi ephephile kakhulu. Kodwa-ke, sicela ubheke ukuthi ngabe uphawu alunjalo yini noma cha njengoba kungenzekile kwezinye izikhathi, uma uphawu seluphazamisiwe, lungangaba yilutho ngaphandle kwamanzi empompo ahlanzekile noma amanzi amabi kakhulu, angahlanzekile. Ku-Indian Railways, uhlobo oluthile lwamanzi amaminerali etholakala ngokujwayelekile laziwa ngokuthi yi “Rail Neer”, oluthathwa njenge oluphephile nolumsulwa.
I-India isebenzisa womabili ama-GSM kanye ne-CDMA nezingcingo ezitholakala kabanzi.
Yazi ukuthi ayikho inkampani eyodwa enikezela i-3G ezweni lonke. Kungcono ukukhetha inkampani ene-3G yokumboza embusweni ozoya kuwo noma uzonamathela ngejubane le-2G.
Izindawo ezinkulu ze-Wi-Fi eNdiya, ikakhulu, zilinganiselwe. Izikhungo zezindiza ezinkulu neziteshi zinikezela nge-Wi-Fi ekhokhelwayo. Delhi, I-Bangalore, i-Pune kanye Mumbai okuyimizi kuphela enesembozo esihle se-Wi-Fi.
UNESCO Uhlu Lwamagugu Emhlaba
Iqembu Lesikhumbuzo eMahabalipuram
Ithempeli leLanga, iKonârak
Amasonto kanye nama-Conveni we Goa
Iqembu Lezikhumbuzo eHampi
I-Khajuraho Iqembu Lezikhumbuzo
Amathempeli Amahle weChola Living
Iqembu Lezikhumbuzo ePattadakal
Izikhumbuzo ZikaBuddha eSanchi
IThompozi likaHumayun, uDelhi
I-Qutb Minar kanye Nezigodlo zayo, Delhi
Izitimela zaseNtabeni zaseNdiya
IMahabodhi Temple Complex eBodh Gaya
I-Champaner-Pavagadh Archaeological Park
UChhatrapati Shivaji Terminus (owayekade eyiVictoria Terminus)
I-Red Fort Complex
I-Jantar Mantar, Jaipur
Izingodo Zentaba ZaseRajasthan
URani-ki-Vav (oyiNdlovukazi kaStepell) ePatan, eGujarat
Isizinda se-Archaeological of Nalanda Mahavihara eNalanda, Bihar
Idolobha elingokomlando lase-Ahmadabad
I-Victorian Gothic ne-Art Deco Ensembles yaseMumbai